Indlela yokuvula iindawo zokuhlamba ezilungileyo
Abantu abaninzi ngoku sele bevulekile izixhobo zokuhlamba kunye nendlela yokuvula izixhobo zokuhlamba ngelo xesha? Ziziphi iimpawu ezifunekayo ukuhlawula ingqalelo? Emva koko siza kunye kunye neengcali zeemarike ukuqonda oku.
Izixhobo zokuhlamba ziye zaba yinxalenye yobomi babantu, kwaye ngokuzalwa kwendlela yokuncedisa impahla, ubomi bomntu wonke buyinto elula, iingubo zinonophelo lwempilo.
Kodwa indlela yokuvula izixhobo zokuhlamba iimpahla? Ukuba ngaba ngabantu boshishino, gxininisa kwisixhobo. Iingcali zoshishino zibonisa ukuba ezininzi izixhobo zokuhlamba iimpahla ziphelile, ngoko ngexesha lokuthengwa kwezixhobo, ukuba uqaphele. Ubungcono kunokukhetha ukomile-ucoce iimpawu zecandelo eliqinisekisiweyo, ngoko uqinisekiso lwexabiso lokuhlamba luqinisekisiwe.
Kodwa ngokuphuhliswa kweemarike, ukhuphiswano lwamashishini luya kwanda, ulawulo lomntu siqu lunokuba noxinzelelo oluninzi. Ngoko ke, kucetyiswa ukuba enye ivenkile ivule ivenkile, inokukhetha, ityhefile yokucoca. Khetha uphawu lweemarike ezineempembelelo, oku akukona kuphela ukuqwashiswa kwemarike, ngexesha elifanayo kwaye kuzisa inzuzo enkulu yemarike.
Okwangoku ezi ziwayo ziyaziwa ngokuchanekileyo zetekisi yokucoca, umzekelo, zithandwa kakhulu ngabathengi, kwaye ilayisenisi yamahhala ayifuni ukukhathazeka ngokujoyina izindleko zotyalo-mali.
Emva kokukhawuleza kwakho, ujoyine ulwazi ukubonelela nge-brand entsha, kwaye kufuneka ungakholelwa ngokulula ukuba ujoyine, ugweme ukubangela ukulahlekelwa koqoqosho.
Indlela yokuvula impahla yokuhlamba impahla? Siyathemba ukuba ngohlalutyo olungentla, sinokukwazi nolwazi oluninzi kulo mbandela. Ebomini xa ufuna ukwazi ulwazi oluthe xaxa malunga nezoshishino ezicocekileyo, unokwenza iinkonzo zokunxibelelana nabathengi be-intanethi kwi-intanethi, okanye uphendule amanye amanqaku kule ndawo.
Inqaku lokugqibela: Sisiphi isisombululo sesiphene...
Inqaku elilandelayo: Unokukhetha njani umgangatho w...